कोरोना भाइरस साँच्चै डरलाग्दो कि मेडिकल कर्पोरेटको हल्ला ? – Enayanepal.com
२०७७, १५ जेष्ठ बिहीबार मा प्रकाशित
७० हजार वर्षको मानव सभ्यतामा कोरोना अर्थात कोभिड-१९ को बहानामा संसारलाई यति लामो समयसम्म लकडाउनको नाममा पिंजडामा थुनिएको यो पहिलोपटक हो। २० करोड मान्छे मार्ने ब्ल्याक डेथ, १० करोड मान्छे मार्ने स्प्यानिश फ्लू, ५ करोड मान्छे मार्ने प्लेग अफ जस्टियन, ५ करोड मान्छे मार्ने बिफरजस्ता महामारीमा पनि मानव जातिले यस्तो भयंकर आतंक व्यहोर्नु परेको थिएन।
४ करोड मानिस मारिएको पहिलो विश्वयुद्ध र ८ करोड मान्छे मारिएको दोश्रो विश्वयुद्ध पनि मानव जातिका लागि यति कठोर त्रासदीमय पक्कै थिएन। मृत्युको भय देखाएर सारा मानिसलाई कैदी बनाइएको लकडाउको नीति र कोभिड-१९ को त्रास के साँच्चै जायज छ ? या कोरोना र लकडाउनको बहानामा मानवतामाथि नृशंस अत्याचार भइरहेको छ ? तथ्य, तर्क र विज्ञानका आधारमा सबैले यसबारे निर्मम र गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्ने भएको छ।
महामारी कोरोना कि पुँजीवाद ?
आफूलाई मानव सभ्यताको अन्तिम र उत्कृष्ट सामाजिक व्यवस्था भनिराखेको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद यतिबेला हायलकायल छ। कोभिड-१९ को आगमनपछि पछिल्लो पाँच महिना पुँजीवाद अनिँदो बसिराखेको छ। मानिसहरूमा देखापर्ने सबैखालका रोगमा औषधि र भ्याक्सिनको ‘मिसायल संस्कृति’ मात्रै स्थापित गरेको पुँजीवादको स्वास्थ्य प्रणालीसँग कोभिड-१९ विरुद्ध तेर्स्याउन न औषधि भयो न भ्याक्सिन। न त कोभिड-१९ को गुण, चरित्र र आयुका बारेमा पुँजीवादी स्वास्थ्य प्रणालीले स्पष्ट जवाफ नै दिनसक्यो।
त्यसपछि अनिश्चित औषधि र भ्याक्सिनको प्रतिक्षामा दुँनियालाई त्रास र आतंकको मिसाइल हानेर लकडाउनको अति रक्षात्मक र निरीह बिकल्प रोज्न पुग्यो पुँजीवाद। नाफा, नाफा र नाफा मात्रै हेर्ने दृष्टि बनेको पुँजीवादसँग सिङ्गै मानव जातिको स्वास्थ्य रक्षा र वैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने गिदी हुने सम्भावना नै थिएन। अझ दोस्रो विश्वयुद्धपछिको नवउदारवादको जाँतो पिनाईमा जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषय निजीकरण र नाफाकरणको यात्राले रोगको उत्पादन, औषधिको उत्पादन र बिरामीको उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न पुग्यो पुँजीवाद। र त मानव स्वास्थ्यका निम्ति आइलाग्ने प्राणघातक रोगहरूभन्दा पनि निकै डरलाग्दो र भयानक छ ‘महामारी पुँजीवाद’।
मेडिकल कर्पोरेटको गोटी WHO:
भू-मण्डलीकृत पुँजीवादले विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) लाई विश्वको एकमात्र जनस्वास्थ्यको वैधानिक नेतृत्व बनायो। कर्पोरेटहरूले सञ्चालन गरिराखेको WHO पनि कर्पोरेटहरूलाई नाफा आर्जन गराइदिन नीति बनाउने संस्था बन्ने नै भयो। बिल गेट्स संलग्न भएका संसारका कर्पोरेट हाउसले मेडिकल कर्पोरेट संचालन गर्नु र तिनै बिल गेट्सका संस्थाहरू WHO को मुख्य अनुदानकर्ता हुनुले WHO मेडिकल कर्पोरेटहरूको इशारामा टाउको हल्लाउने संस्था हो भन्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन। सन् २०१९ सम्म बार्षिक तीन ट्रीलियन डलरसम्म हुने मेडिकल ब्यापार ०२० को यो लकडाउनको अबधिमा मात्रै ३० प्रतिशतले वृद्धि हुनुले WHO मेडिकल कर्पोरेटको ब्यापारबृद्धिको बैधानिक कठपूतली वा गोटी बनिराखेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। जसरी संसारका खास शक्तिराष्ट्रहरूको इशारामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सञ्चालित हुन्छ।
कोरोना किन महामारी होइन ?
कुनैपनी रोगलाई महामारी या प्राणघातक भन्न मानव जातिसँग त्यो रोगलाई परास्त गर्ने औषधी या उपाय नहुनुपर्छ। रोगको गुणात्मक संक्रमण दर तीब्र हुनुपर्दछ र रोगको चरित्र प्राणघातक हुनुपर्ने हुन्छ। यी तीनवटै दृष्टिबाट हेर्दा कोरोना महामारी र प्राणघातक रोग होइन भन्न प्रशस्त तर्क र तथ्यहरू छन्।
आजसम्म संसारमा करिब ५६ लाख कोरोना संक्रमित मध्ये करिब २२ लाख ८८ हजार निको भएर घर फर्किसकेका छन्। कोरोना महामारी या प्राणघातक रोग होइन भन्न ती २४ लाख निको भएर फर्किएका मानिसहरू काफी छैनन र ?
कोरोनालाई प्राणघातक सरुवा रोग नै मानिदिँदा पनि ९० प्रतिशत मृत्युदर भएको भनिएको रेबिज, ८० प्रतिशत मृत्युदर भएको भनिएको एड्स, ८७ प्रतिशत मृत्युदर भएको भनिएको इबोला, ६५ प्रतिशत मृत्युदर भएको भनिएको बिफरदेखि, २.१ प्रतिशत मृत्युदर भएको भनिएको स्वाइन फ्लूलगायत सरुवा रोग मध्येको कोरोनाको सबैभन्दा न्यून अर्थात ०.१ प्रतिशत मृत्युदर मात्र छ। अर्थात बाहिर कोरोनाको कारण देखाइएको त्रास र मृत्युको भयाबह दृष्य आजसम्मका सबै सरुवा रोगमध्येको सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो।
कोभिड-१९ को आरटी- पीआरसी टेष्ट प्रणालीको आविष्कार नोबल पुरस्कार विजेता बायोकेमिस्ट केरी मुलस स्वयंले पीसीआर टेष्ट केबल अनुसन्धानको लागि हो यसको आधारमा कुनै भाइरसको निर्धारण अनि उपचार या औषधीको सिफारिस गर्नु सही हुन्न भनेका छन्। आज WHO त्यही केरी मुलसको अनुसन्धानको लागि गरिएको पीसीआर प्रणालीबाट कोभिड-१९ नामको भाइरसको नामाकरण गर्ने र यसको प्राणघातक गुणको झ्याली पिट्ने काम गरिरहेको छ। त्यही पीसीआर टेष्टको आधारमा रोगी घोषणा गरेर मान्छेले मान्छेलाई छुन नहुने, नजिक जान नहुने लगायतका सामाजिक अन्याय गरिएको छ।
कोरोना संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशतमा लक्षण नै देखानपर्ने, १५ प्रतिशतमा सामान्य लक्षण देखिने र सहजै निको हुने अनि ३ देखि ५ प्रतिशतलाई मात्रै उपचारको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ भनेर स्वयं WHO ले भनिराखेको छ। अर्थात, संसारमा करोड मानिसहरूको शरिरमा कोभिड-१९ छिरेर भागेर पनि गैसक्यो होला। यसरी सजिलै सामान्य खानपानबाटै उत्पन्न हुने सामान्य इम्युनबाटै भागेर जाने कोरोनालाई महामारी र प्राणघातक भन्न मिल्छ ?
कोभिड-१९ लाई महामारी प्रमाणित गर्न हरेक दिन मानिसहरूको मृत्युको अंकगणित अगाडि सारिन्छ र आजसम्म ३ लाख ५० हजार कोरोनाबाट मरिसके भनेर प्रचार गरिन्छ। जबकी चीन, इटली, अमेरिका, स्वीडेन, बेलायत, फ्रान्स, ब्राजिल, जर्मनी लगायत कोरोनाबाट मृत्यु भएको भनिएका मानिसहरूको तीनवटा तथ्यलाई जबर्जस्त लुकाइएको छ।
तर्क छ :
WHO पुँजीवादी व्यवस्थाले एलोपेथी उपचार प्रणालीलाई मात्रै मानव स्वास्थ्य विज्ञानको पर्याय बनायो। आयुर्वेद, होमियोपेथिक, प्राकृतिक चिकित्सा योगा, प्राणायम, घरेलु उपचार विधि, युनानी उपचार र कैयौँ नयाँ उपचार वास्ता गरेको देखिँदैन। जसको परिणाम एक चक्की औषधि नखाई एक सुई भ्याक्सिन समेत नलगाई सामान्य खानपानबाटै निको भइरहेको देख्खादेख्दै एलोपेथीकै चक्की औषधि र भ्याक्सिनको प्रतिक्षालयमा संसारलाई मनोरोगी बनाएर कुराइएको छ।
मानिसको शररीरमा ५० हजार थरिका भाइरसहरू हुने रहेछन। त्यसमा कोभिड-१९ थपिएर ५० हजार एक भयो होला। एउटा नाथे सिजनल फ्लू सरहको भाइरसको त्रासमा सिङ्गै मानवीयताको अपहरण गर्ने कुरा कसरी जायज मान्न सकिन्छ ?
हरेक मानिसको मृत्यु श्वास रोकिएपछि र मुटु चल्न बन्द भएपछि हुन्छ। संसारमा स्वासप्रस्वासको रोगले मात्रै दैनिक १६००० मानिसहरू मर्छन्। मुटु रोगले दैनिक २५००० मानिसको मृत्यु हुन्छ। उनीहरू मर्दाको दृश्य निकै नै हृदयविदारक हुन्छ। अहिले कोभिड-१९ बाट मान्छे मर्न थाले भनेर भेन्टिलेटरमा अन्तिम श्वास लिइरहेका मानिसहरूको श्रब्यदृष्य दुँनियालाई देखाइयो। यसरी प्रस्तुत गरियो कि कोरोना अगाडि त मानिसहरू नछट्पटाई मर्दथे, पीडाबिना नै मान्छे मर्दथे। मानवीय संवेदनामाथि योभन्दा अपराध के होला र ?
तर्क नौ :
कोरोना शुरु भएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले हर सेकेण्ड त्रास यसरी फैलायो कि मानिसहरू त्रास, स्तब्धता र आतंकको सुनामी आएको महशुस गर्न थाले। सबैलाई एकपटक मृत्युसँग आत्मसमर्पण गर्न लगाईयो। मनोवैज्ञानिक त्रासले मानिसलाई यति कमजोर बनाईयो कि तनाब, मनोरोग, त्रासदी र मृत्यु बाहेक मानिसहरूले अरु देख्नै छोडे। उच्च मनोबल, सामान्य साबधानी र स्वस्थ खानपानले ‘फू’ गर्दा ढल्ने कोरोनालाई हाउगुजी नै बनाइयो। बिरामीको नजिक जान नदिने, बिरामीलाई छुन नदिने, बिरामीलाई घृणा गर्ने, खिसिट्युरी गर्ने, हेयको नजरले हेर्ने जस्ता सामाजिक ब्यवहारहरू सिर्जना गरियो। कल्पना गरौं ! यस्तो घृणित र अमानवीय ब्यवहारको कहरले कति मानिसहरू डराएरै मरे होलान? के मानवतामाथी गरेको यस्तो गम्भीर अपराधको WHO र आजको पुँजीवादले क्षतिपूर्ति तिर्न सक्छ ?
एलोपेथी उपचार प्रणालीका ज्ञाताहरू स्वयं एलोपेथीमा भाइरस र भाइरलका विरुद्ध एन्टिबायोटिक बनेको पनि छैन र चलाउन पनि मिल्दैन भन्छन्। अनि अरु रोगको एन्टिबायोटिक परीक्षणको रुलमा लगाउँदा पनि हामी एकोहोरो सुगा रटान रटिरहेका छौं कि औषधि बनोस, औषधि बनोस।
WHO को आदेश नमान्ने लकडाउन नगर्ने देशहरू:
चीनको आफ्नै टेरिटोरीभित्र छ ताइवान। ताइवानमा चीन लगत्तै कोरोना संक्रमण देखापर्‍यो। तर, WHO को आदेश लत्याएर WHO बाट प्रतिबन्धित हुन तयार भएर पनि ताइवानले लकडाउन गरेन। अन्तत: संक्रमण छिट्टै पुगिसकेको ताइवानमा कोरोनाको मृत्युदर शुन्यप्राय: भयो। यता WHO को २० मिलियन डलरको अफरलाई समेत अस्वीकार गरेर आफ्नै परम्परागत औषधीले कोरोना परास्त गर्ने अर्को मुलुक मडगस्कर हो। तान्जनियाले पनि WHO को आदेश मानेन र शून्य मृत्युदर देखियो।
भियतनाम, कम्बोडिया, क्युबा, उत्तर कोरिया, जापान, भुटान, बेलारुस, रुवान्डा लगायत दर्जनौं देशहरूले लकडाउन नै गरेरन। तै पनि असाध्यै कम या शून्य मृत्युदर देखिएको छ। दक्षिण कोरियाले त यही बीचमा संक्रमण व्यापक भयो भन्दाभन्दै संसदीय चुनाव नै गरिदियो। अष्ट्रेलियाले लकडाउन भन्दा सावधानीलाई जोड दियो। यसरी आफ्नो परम्परागत उपचार प्रणाली, आत्मविश्वास र सामान्य सावधानीले कोरोनालाई सजिलै परास्त गर्नसकेका यी मुलुकका उदाहरणहरू लकडाउन गलत हो भन्न काफी छ।
हाउगुजी कोरोना र असफल लकडाउन:
माथिका तथ्य र छलफलले कोरोनाको हैसियत सामन्य सिजनल फ्लूसरह छ भन्न सजिलै सकिन्छ। अज्ञानतामा इश्वरको जन्म भएजस्तै कोरोनाको बारेमा वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न नसक्दा पनि दुँनियाले लकडाउनको निरीह नीति अख्तियार गर्नपुग्यो। बेलायती नोबल पुरस्कार बिजेता माइकल लेबिटले समेत लकडाउन असफल भएको र लकडाउनकै कारणले पनि कतियपको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्।
अहिले त थुप्रै डाक्टर, प्रोफेसर र वैज्ञानिकहरू लकडाउनको खिलाफमा खुला बहस गरिरहेका छन। अकस्मात आएको कुनै अजिव जीव देखेर लुकेको जस्तो युरोपले लकडाउन गरेर मानिसहरूलाई लुक्न बाध्य गरायो। खासमा कोरोनाको बारेमा WHO र केही मेडिकल कर्पोरेटहरूले फैलाएको आतंक र भय गलत भइसकेपछि अहिले युरोप पनि लगभग लकडाउन अन्त्य गर्ने स्थितिमा पुगेको छ। युरोपका अधिकांश देशहरूको जनजीवन सामान्यतिर जाँदैछ। यता करोडौंको मृत्युको त्रास बाँडेर लकडाउन गरेको भारत पनि हवाई, बजार र रेलहरू संचालन गर्ने ठाउँमा आइसकेको छ। चीन सम्पूर्णरुपमा सामान्य अवस्थामा आइसकेको छ। यो अवस्थामा लकडाउनको निरन्तरता जरुरी नै देखिन्न।
WHO आफै कोरोनाको अन्त्य अनिश्चित छ भनिराखेको छ। २ देखि ५ वर्ष हामीले यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भनिराखेको छ। त्यसको मतलब २ देखि ५ वर्ष लकडाउन गर्न सम्भव हुने कुरै भएन। केही हप्ता र महिना लकडाउन गर्दा त दुनियाँको अर्थतन्त्र २० वर्ष पछाडी गयो भनेर विश्लेषण गरिराखेको पुँजीवादको लागि लकडाउन गर्नु भनेको आफ्नै फोक्सो र मुटु चल्न नदिनु जस्तै हो।
लकडाउनको असफल र आपराधिक निर्णयले जनजीवन असाध्यै कष्टकर भइराखेको छ। गरिबी, भोक र अभावले संसार आक्रान्त भइराखेको छ। मानिसहरूलाई रोगले भन्दा हजार गुणा भोकले मारिरहेको र मारिने ग्यारेन्टी छ। त्यसकारण लकडाउनको तुरुन्तै अन्त्य गर्नुको बिकल्प नै छैन।
कोरोनाको ओखती इम्युनिटी
आजसम्म कोरोनाबाट निको भएका मानिसहरू उनीहरूको इम्युन सिस्टम र खानपानले मात्रै निको भएका हुन। हामीले असफल पुँजीवादी स्वास्थ्य प्रणालीको बिकल्पमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणाली र मानव स्वास्थ्यको बारेमा नयाँ गम्भीर बहस गर्नैपर्ने हुन्छ। एलोपेथी उपचार विधिलाई कर्पोरेटहरूको नाफाको मुख्य क्षेत्र बनाइको आजको परिवेशबाट मुक्त गर्न सकिएन भने यस्ले मानव स्वास्थ्यलाई पैसा कमाउने क्षेत्र मात्रै बनाइरहेको र बनाउने नै छ।
आज पनि औषधि र भ्याक्सिन निर्माणका लागि अहोरात्र खटिरहेका वैज्ञानिकहरूलाई हामीले सम्मान त गर्नैपर्छ। तर त्यो आविष्कार कर्पोरेटहरूको नाफाको उत्पादनमा परिणत हुनेवाला छ। आयुर्वेद, होमियोपेथिक उपचार, युनानी उपचार, प्राकृतिक उपचार, योगा, प्राणायम, घरेलु र परम्परागत उपचार र नयाँ प्रकृतिक स्वास्थ्य प्रणाली अपनाउनै पर्ने हुन्छ। किनकी लकडाउनको अवधिमा प्रदूषण नभएपछि र बजारको खानेकुरामा कमी भएपछि धेरै मानिसहरूलाई हस्पिटल जानुपर्ने अवस्था नै आएन। प्रकृतिमा जीव, पंक्षी र वनस्पति जस्तै हाम्रो शरीरको मेकानिज्म पनि प्राकृतिक नै छ। तसर्थ प्राकृतिक खाद्य सँस्कृतिको निर्माण र प्राकृतिक जीवनशैलीको विकासले मात्रै हाम्रो शरिरको स्वस्थता र रोगप्रतिरोध क्षमताको विकासको रफ्तार तीब्र हुनेछ।